भेरोसेलको दोस्रो डोज कहिले? « रिपोर्टर्स नेपाल
काठमाडौं,कात्तिक १० । एक महिना अघि चीनबाट नेपाल आएको ४४ लाख डोज भेरोसेल खोपको पहिलो मात्रा देशैभरका सबै जिल्लामा असोज ४ देखि १४ गतेसम्म दिइएको थियो । तर,अहिलेम्म कुनै पनि जिल्लामा भेरोसेलको दोस्रो डोज लगाउने मिति तोकिएको छैन ।
मन्त्रालयका स्वास्थ्य सेवा विभाग खोप शाखा प्रमुख डा सागर दाहालले भने खोपको वितरण गर्ने अधिकार जिल्ल्ला स्वास्थ्य कार्यालयलाई दिएकाले जिल्लाले आफ्नो प्राथमिकता र अनुकुलका हिसाबले १४ गतेसम्ममा दोस्रो मात्रा दिन सक्ने बताए।
नेपालमा उपलब्ध उक्त खोपको म्याद तत्काल नसकिने भएका कारण केही दिन ढिला हुँदैमा आत्तिनु नपर्ने उनले बताए । सामान्यतया पहिलो डोज खोप लगाएको चार हप्तापछि दोस्रो डोज लगाउन मिल्ने भनिएपनि एक–दुई हप्ता ढिलो हुदैंमा खोपले शरीरमा पार्ने प्रभावमा कुनै फरक नहुने उनको भनाई छ ।
काँग्रेस प्रदेश १ को सभापतिमा गुरुराज घिमिरे उम्मेदवार
काठमाडौं, १६ । नेपाली काँग्रेस प्रदेश १ को सभापतिका लागि गुरुराज घिमिरे संस्थापन इतर समूहबाट
मंसिर २८ बाट दुवै सदनको अधिवेशन
काठमाडौं, १६ मंसिर । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रियसभाको बैठक आव्हान गरेकी छिन्
थापा विरुद्ध लिङ्देन, प्यानलमा को को (सुचीसहित)
काठमाडौं, १६ मंसिर । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा अध्यक्षका प्रतिष्पर्धी बन्न लागेका कमल थापा र राजेन्द्र
देउवासँग काँग्रेस सभापतिमा लड्ने प्रकाशमान कि शेखर ?
काठमाडौं, १६ मंसिर । नेपाली काँग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा सभापतिका आकांक्षी धेरै भएपछि संस्थापन पक्षबाट शेरबहादुर
काँग्रेस लुम्बिनी प्रदेश चुनावः खाँड बने देउवाको खम्बा
काठमाडौं, १६ मंसिर । नेपाली काँग्रेसको लुम्बिनी प्रदेशमा सभापति शेरबहादुर देउवा र इतर समूहबीच कडा
काँग्रेस बागमती प्रदेशको चुनावः देउवासँग जुध्न बढेका प्रकाशमान सिंहको शक्ति परीक्षण
काठमाडौं, १६ मंसिर । नेपाली काँग्रेसको बागमती प्रदेशको अधिवेशन अन्तर्गत शनिबार निर्वाचन हुँदैछ । काठमाडौं
दुर्गा पौडेलले भनिन्–‘सत्ता गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेको छैन, महाभियोगबारे त छलफल नै भएको छैन्’
काठमाडौं, १६ मंसिर । सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद तथा नेतृ दुर्गा पौडेलले गठबन्धनले
छाला रोग र सौन्दर्य समस्याको सम्पूर्ण उपचार गेट वेल सुनमा, प्रसिद्ध विशेषज्ञ अब जनकपुरधाममै
जनकपुरधाम, १६ मंसिर । प्रदेश २ को राजधानी जनकपुरधामस्थित मुरली (विद्यापति) चोकमा छाला एवं सौन्दर्यसम्बन्धी
यौनकाण्डले चीनमा हुने टेनिस प्रतियोगितामाथि निलम्बन
एजेन्सी, १६ मंसिर । चीनमा हुने टेनिस प्रतियोगिताहरुलाई द वुमन्स टेनिस एशोशिएसनले निलम्बनमा राखेको छ
काठमाडौं, १६ मंसिर । भारतमा कोरोना भाइरसको नयाँ प्रजाति ओमिक्रन भेटिएको छ । कर्नाटक राज्यमा